Izindaba - Uyini umehluko phakathi kwe-dual action polisher ne-rotary polisher
Uyini umehluko phakathi kokupholisha okuphindwe kabili kwesenzo ne-rotary polisher?
Uma kuziwa ekukhetheni i-polisher yomshini, omunye wemibuzo evame ukubuzwa amakhasimende ethu ukuthi: "Uyini umehluko phakathi kwe-polisher-action polisher ne-rotary polisher?" Umbuzo omuhle kakhulu futhi kulabo abasanda kuqala ngomshini wokupholisha umshini, impendulo ibaluleke kakhulu!
IRotary Polisher yindala kunayo yonke esigabeni sayo, ngaphambi kokuthi iphume kuzinyathelo ezimbili, besinalo lolu hlobo lokupholisha kuphela. Ama-polisher rotary aqonde kakhulu - ikhanda liphotha indlela eyodwa kuphela noma ngabe ulicindezela kangakanani kupende lakho lemoto, lizoqhubeka nokujikeleza ngejubane elikhethiwe. Iphinde ijikeleze ku-orbit engaguquki, idale ukusika okunolaka ngokwengeziwe kepha kudale ukushisa okwengeziwe. I-polisher rotary izodinga ukuthi ube nolwazi oluningi, kufanele uhambise i-polisher ngesandla futhi udinga ukwazi ukuthi ushesha kangakanani ukuhambisa umshini ngapende. I-polisher ye-rotary inolaka kakhulu, ngakho-ke izolungisa ukuklwebheka okujulile futhi ipende amaphutha, kuphela uma isetshenziswe kahle.
I-Dual Action Polisher (noma i-DA Polisher njengoba ivame ukufinyelelwa) kwakuyindalo yokuguqula isimo. Ijikeleka ngezindlela ezi-2 ezihlukile: ikhanda liphotha isenzo esiyindilinga esigxivizaneni esiphindaphinda ukunyakaza okujikelezayo okubanzi, ngakho-ke kusabalalisa ukushisa endaweni enkulu, kuvimbela ukushisa okweqile nokwakha ukungqubuzana, kukwenza kuphephe kakhulu emotweni yakho. Ngenxa yalokho, uyakwazi ukushiya le polisher ijikeleza endaweni eyodwa futhi uyivimbele ekushiseni upende wakho. Lokhu kwenza i-DA ibe yisinqumo esifanelekile kumuntu othanda amateur obheke ukugcina imoto ibukeka njenge-'top top 'kodwa ngaphandle kokukhathazeka ngokuphalazwa kabusha okungenzeka kube khona!